Ambanidia : Polisy nitifitra nahafaty ny namany sy olona iray hafa
Teny Faliarivo Ambanidia ny alin’ny zoma no nisehoan’ity tranga ity. Polisy iray no nitifitra ka nahafaty ny namany iray sy olona iray hafa.
Samy mbola mpianatr’asa eo anivon’ny « service anti-gangs » (Sag) na ny sampana eo anivon’ny polisim-pirenena miady amin’ireo jiolahy rain-dahiny na ilay nitifitra na ilay maty. Mpianatra kosa ilay voatifitra faharoa. Tokantrano iray voalaza fa hisy hanafika no nahatonga ity zava-doza ity.
« Araka ny fantatro dia nisy nikasa ny hanafika tao amin’io trano ipetrahan’ireo zanak’anabaviko tamin’io fotoana io. Niteny tamin’ireo fianakaviako izay manofa ny zanak’ilay tompon-trano mba tsy hivoaka fa hisy jiolahy hanafika. Naheno olona nikotaba tao ambany anefa ilay zanak’anabaviko dia nidina nijery ary somary niafina. Tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany io. Tonga tao ambany izy dia io voatifitra teo amin’ny saokany io, ary raha ny fijeriko azydia notifirina akaiky kely mihitsy izy », hoy Ralaivao Henri Jacob, dadatoan’ilay tovolahy maty voatifitra.
« Tany Anosibe ny Sag no naharay antso fa misy mitady hanafika eny Faliarivo Ambanidia. Rehefa tonga teny izy ireo dia nifanena tamin’ny tompon-trano, izay nikasa ny handeha hampandre polisy tamin’ny fiaran’izy ireo. Teo no niteny ny avy amin’ny Sag fa tokony hiantso avy hatrany ny Uso na ny Gir izay akaiky ireo tompon-trano, raha misy tranga hafahafa. Handeha hanatitra io laharana io any amin’ireo olona mpanofa ny zanak’ilay tompon-trano ary narahin’ireo polisy roa izay samy mpianatr’asa.
Ny iray tamin’ireo polisy no nialoha lalana ka rehefa tonga teo amin’ny elankelan-trano dia avy hatrany dia notolomina tovolahy iray nitondra antsy. Nihevitra izy fa jiolahy ilay polisy, ny andro rahateo maizina. Nahita izany ilay namany dia nanao tifi-danitra indroa kanefa mbola nitohy ihany ny fifampitolomana. Nitifitra ihany koa ilay polisy avy aty aoriana taorian’io ka ilay namany no voa. Voakasiky ny bala ihany koa ilay heverina fa jiolahy. Taorian’izay vao fantatra fa tsy jiolahy ilay nitolona ilay polisy », hoy ny kaomisera Ranaivoson Alexandre, tompon’andraikitry ny fampitam-baovao eo anivon’ny polisim-pirenena.